Waa Maxay Sababta Ashley Cole Looga Neceb Yahay England? (Warbixin Xiiso Leh) | Laacib.net
Waa Maxay Sababta Ashley Cole Looga Neceb Yahay England? (Warbixin Xiiso Leh)
June 11, 2019 Balaleti 0
Ashley Cole wax walba ayuu ku qaaday Premier League laakiin daafaca bidix ee England u dashay waxa aad looga neceb yahay dalkiisa Ingariiska.
Qiyaano, xaaskiisii uu xumeeyay, saaxiib aan daacad aheyn – sidee ayuu Ashley Cole ku noqday qof ka takooran bulshada England inteeda kale.
Labo jeer ayuu la hantay Premier League, seddex jeer ayuu qaaday FA Cup, final ayuu gaaray Champions League, wuxuu ka mid ahaa kooxdii Arsenal ee guuldarro la’aanta ku qaaday horyaalka, waxaana loo arkayay inuu yahay wiilka loogu jecel yahay kooxda Arsenal.
Wuxuu maaliyada Arsenal xirnaa tan iyo markii uu sagaal sanno jir ahaa, wuxuu xitaa Pizza ku tuuray wajiga Sir Alex Ferguson isagoo difaacaya Arsenal, laakiin halkee ayay wax ka xumaadeen?
Ashley Cole ayaa bilaabay inuu qalbijabiyo taageerayaasha Arsenal, qandaraaska Cole ayaa dhamaaday dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2005-06, waxaana bilowday xan la xiriirtay inuu baxayo oo uusan qandaraaska kordhineynin.
Laakiin Arsene Wenger ayaa deganaan muujiyay: “Waxaan 100% hubaa in Ashley Cole uu qandaraaska kordhin doono. Aad ayuu ugu faraxsan yahay Arsenal. Ma uusan na weydiisan kamana fiirsan inuu baxayo.”
Laakiin wixii aan lagu fekereynin ayaa dhacay, iyadoo finalka Champions League ay guuldarro ka soo gaartay Barcelona ma uusan kordhinin qandaraaskiisii Arsenal. Waxaase uga sii xumeyd inuu ku biiray Chelsea, kooxda ay London ku xafiiltamaan.
Qiyaanoole ayay ugu yeereen jamaahiirta Arsenal, magaciisii Ashley Cole waxa uu isku bedelay Cashley Cole madaama uu raacay lacagtii bilyaneerka reer Russia Abramovich.
Laakiin qamaarkii uu Cole ku galay Chelsea waa uu ku najaxay, waxaana uu ku guuleystay horyaalo isku xiga, waxa uu ka garab muuqday Frank Lampard, Didier Drogba iyo xitaa Eden Hazard.
Sannadii 2008 waxaa isbedeshay noloshiisa, xaaskiisii Cheryl Cole ayaa ka war heshay inuu xiriir hoose la lahaa Amy Walton, waxaa ka dhex dilaacay dagaal, taasoo keentay in gurigiisa laga ceyriyo.
Intaasi kuma ekeen oo xaalada waa ay uga sii dartay Cole, bilo yar ka dib wuxuu qiyaameeyay mar kale xaaskiisa iyadoo weliba ay u dabaaldegeyso dhalashadeeda. Waxayna taasi noqotay mid aan ka soo laabasho laheyn, waxana ay isfureen sannadii 2010.
Isla waqtigaas arin kale oo muran dhalisay ayaa hareysay xiddiga England, sannadii 2011 John Terry ayaa lagu eedeeyay inuu hadalo cunsuri ah ku yiri Anton Ferdinand oo ay walaalo yihiin Rio Ferdinand.
Ashley Cole oo ay John Tery isku koox iyo qaranba ahaayeen islamarkaana ay saaxiibo dhow ahaayeen Rio Ferdinand ayaa waxaa soo wajahday kala doorasho adag.
Ma wuxuu la jiraa kabtankiisa John Terry mise saaxiibkiis Rio Ferdinand?
“Saaxiibtinimadii igala dhaxeysay Ashley Cole waa ay soo dhamaatay markii uu doortay inuu taageero John Terry” ayuu ku dhawaaqay Rio Ferdinand.
Inkastoo ay arimahaan ku dhacayeen hadana Cole waxa uu sii buuxsanayay armaajadiisa koobabka. Champions League, Europa League, Premier League, dhowr FA Cup ayuu qaaday.
Waxa uu ka dib u ciyaaray AS Roma oo uu kaga sii biiray kooxda Mareykanka ee LA Galaxy ka hor inta uusan waayihiisa ciyaareed ku soo gabagabeynin kooxda Dery County ee uu tababare u yahay Frank Lampard.
Dad badan ayaa u arko inuu yahay daaficii bidix ee ugu fiicnaa ee soo mara England, laakiin waxaa mar walba waayihiisa ciyaareed garab socon doona qiyaanadii uu ku sameeyay Arsenal soo saartay, xaaskiisa uu dhowr jeer qiyaameeyay islamarkaana ceebeeyay iyo inuu ka jeestay saaxiibkiis Rio Ferdinand waqtigii uu u baahnaa.